The Death of Stalin(2017) | MM Movie Store
စဈအာဏာရှငျဆိုပွီး စတာလငျကို မသိတဲ့သူ ခပျရှားရှားပါပဲ…သူ့ရဲ့ အကွောငျးတှဟော သမိုငျးစာမကျြနှာရဲ့ဆိုးယုတျမှုဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျအောကျမှာ အမွဲနရောယူထားလရှေိ့တယျ…လူသနျးပေါငျး (၂၀)ခနျ့ကို သတျခဲ့တဲ့သူ..သတျခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေလညျးသူ့အတ်တနဲ့ သူ့မာနတှကွေောငျ့က ခပျမြားမြား…..
ဒီလို အာဏာရှငျကို လူတိုငျးက သခေငျြနကွေနကွေတယျ….ဒီဇာတျကားကတော့ စတာလငျရုတျတရကျကှယျလှနျသှားပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာ အုပျခြုပျရေးပိုငျးက လူကွီးတှကေရောဘယျလိုတှတေုနျ့ပွနျကွလဲ…ဘယျလိုတှရှေဆေ့ကျကွလဲ….
ဒါတှအေားလုံးကို ဟာသလေးနှောပွီး ပွောငျမွောကျစှာပုံဖျောထားတယျ…ဟာသနှောတယျဆိုပွီး ဒီကားကရဲ့ ပုံစံကိုတဈမြိုးမထငျလိုကျနဲ့ဦး…အကုနျလုံးက ပညာသားပါပါနဲ့ လှလှပပလေးထိုးနှကျသှားတာ..မူရငျးပုံစံတှနေဲ့ အနှဈသာရလညျးမပြောကျပကျြအောငျသမိုငျးကွောငျးကိုလညျး သှဖေီမသှားအောငျ အားလုံးကိုအပွောငျမွောကျဆုံးတငျဆကျထားတယျ…
ဒါကွောငျ့လညျး ဆုပေါငျး(၁၈)ဆု အခွားဆုမြားအတှကျ ဆနျကာတငျ(၃၂)ဆုရှေးခယျြခံ၇သလိုRating တှအေနနေဲ့လညျးအမွငျ့ဆုံးကိုရရှိထားတယျ…ကိုငျး နိုငျငံရေးကိုလညျး လလေ့ာဖွဈ ဟာသလေးတှလေညျး သဘောကတြဲ့အဖွဈကိုရောကျရှိစမေယျ့ ကားဆိုတော့ကွညျ့လိုကျကွပါဦးဗြို့….
စစ်အာဏာရှင်ဆိုပြီး စတာလင်ကို မသိတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားပါပဲ…သူ့ရဲ့ အကြောင်းတွေဟာ သမိုင်းစာမျက်နှာရဲ့ဆိုးယုတ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အမြဲနေရာယူထားလေ့ရှိတယ်…လူသန်းပေါင်း (၂၀)ခန့်ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူ..သတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကလည်းသူ့အတ္တနဲ့ သူ့မာနတွေကြောင့်က ခပ်များများ…..
ဒီလို အာဏာရှင်ကို လူတိုင်းက သေချင်နေကြနေကြတယ်….ဒီဇာတ်ကားကတော့ စတာလင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လူကြီးတွေကရောဘယ်လိုတွေတုန့်ပြန်ကြလဲ…ဘယ်လိုတွေရှေ့ဆက်ကြလဲ….
ဒါတွေအားလုံးကို ဟာသလေးနှောပြီး ပြောင်မြောက်စွာပုံဖော်ထားတယ်…ဟာသနှောတယ်ဆိုပြီး ဒီကားကရဲ့ ပုံစံကိုတစ်မျိုးမထင်လိုက်နဲ့ဦး…အကုန်လုံးက ပညာသားပါပါနဲ့ လှလှပပလေးထိုးနှက်သွားတာ..မူရင်းပုံစံတွေနဲ့ အနှစ်သာရလည်းမပျောက်ပျက်အောင်သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း သွေဖီမသွားအောင် အားလုံးကိုအပြောင်မြောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားတယ်…
ဒါကြောင့်လည်း ဆုပေါင်း(၁၈)ဆု အခြားဆုများအတွက် ဆန်ကာတင်(၃၂)ဆုရွေးချယ်ခံ၇သလိုRating တွေအနေနဲ့လည်းအမြင့်ဆုံးကိုရရှိထားတယ်…ကိုင်း နိုင်ငံရေးကိုလည်း လေ့လာဖြစ် ဟာသလေးတွေလည်း သဘောကျတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေမယ့် ကားဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျို့….